Wararka Maanta: Axad, July 22, 2012-Guddoomiyaha Gobolka Galguduud oo Dowladdu ay dhawaan magacowday oo maanta gaaray Degmada Guriceel
Guddoomiyaha Gobolka Galguduud oo Dowladdu ay dhawaan magacowday oo maanta gaaray Degmada Guriceel Axad, July 22, 2012 (HOL) — Guddoomiyaha gobolka Galguduud ay dowladda KMG toddobaadkii hore u magacowday gobolkaas, Yuusuf Xasan Ciyoow iyo xubno wehlinaya ayaa saakay ka dagay garoonka diyaaradaha ee degmada Guriceel, halkaasoo ay ku soo dhaweeyeen dadweyne fara badan.
Wafdiga guddoomiyaha oo ay ka mid ahaayeen guddoomiyaha degmada Guriceel, Ciise Cismaan Nuur (Taar-dhuleed) iyo guddoomiyaha degmada Dhuuso-mareeb, Sheekh Cabdiraxmaan Cali Maxamuud (Geedo-Qoroow).
Inkastoo mas'uuliyiintan aysan saxaafadda la hadlin markii ay saakay ka dhoofayeen garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ayaa haddana waxay sheegeen markii xilalka loo magacabaay inay gacan ka geysan doonaan sidii gobolkaas oo dhan ay ammaan ugu soo celin lahaayeen.
Guddomiyaha iyo wafdigiisa ayaa la filayaa inay saxaafadda kula hadlaan gudaha degmada Guriceel, inkastoo aan la ogeyn inay gaari doonaa degmooyinka kale ee gobolkaas uu ka kooban yahay oo ay kala maamulaan Ahlusuna iyo Al-shabaab.
Ururka Ahlusunna Waljamaaca ayaa horay u soo dhaweysay maamulka ay dowladdu u magacowday gobolkaas, iyadoo maamulkan uu noqonayo kii ugu horreeyay oo ay dowladda KMG ah u magacowday gobolkaas.
Axad, July 22, 2012 (HOL) — Iska-horimaad xooggan ayaa xalay ka dhacay degmada Badhaadhe ee gobolka Jubbada Hoose kaasoo u dhexeeyay ciidamada Dowladda KMG iyo kuwa Raaskaambooni oo kaashanaya Militariga Kenya iyo Xarakada Al-shabaab. Wasiirka Duulista Hawada ee Somaliland oo sheegay in la boobay dhulkii Garoonka Diyaaradaha Burco, amarna ku bixiyey in loosoo celinayo 7/22/2012 6:55 AM EST
Axad, July 22, 2012 (HOL) — Wasiirka Duulista Hawadda Somaliland oo hogaaminayo wefti iskugu jira, wasiiro iyo xildhibaano, ayaa olole bannayn ah ka bilaabay garoonkii diyaaradaha ee magaaladda Burco ee xarunta gobolka Togdheer kaas oo muddo badan aan shaqayn. Iskahorimaad khasaare geystay oo Ciidammo kawada tirsan kuwa Dowladda KMG ah ku dhexmaray Magaalada Muqdisho 7/22/2012 6:53 AM EST
Axad, July 22, 2012 (HOL) — Qof haweeney ah ayaa ku dhimatay, laba qof oo kalena way ku dhaawacmeen iska-horimaad ciidammo kawada tirsan dowladda KMG Soomaaliya ku dhexmaray maanta oo Axad ah waddada Maka Al-Mukarama ee magaalada Muqdisho. AMISOM oo sheegay in ciidamadooda iyo kuwa DKMG ah ay hub ka heleen Saldhig ay Al-shabaab ku lahayd Gobolka Gedo 7/22/2012 3:59 AM EST